Investo Nepal | मार्च महिनामा अहिलेसम्मकै बढी पेट्रोलियम पदार्थ भित्रियो, अभाव उस्तै, कहाँ जान्छ यो तेल ?
मार्च महिनामा अहिलेसम्मकै बढी पेट्रोलियम पदार्थ भित्रियो, अभाव उस्तै, कहाँ जान्छ यो तेल ?
काठमाडौं । भारतबाट मार्च महिनामा अहिलेसम्मकै बढी पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार मार्चमा १ लाख ११ हजार किलोलिटर डिजेल, २९ हजार किलोलिटर पेट्रोल र ३० हजार १ सय ३५ टन खाना पकाउने ग्यास नेपाल भित्रिएको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म पेट्रोल २५हजार किलोलिटर, डिजेल ९० हजार किलोलिटर र ग्यास २९ हजार टन भित्रिएको रेकर्ड छ । मार्च महिनामा अहिलेसम्मकै बढी पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएपनि अभाव भने हट्न सकेको छैन । अहिलेपनि डिजेल र ग्यासको अभाव कायमै छ । पेट्रोल भने सहज बनिसकेको छ । ‘मार्च महिनामा भित्रिएको पेट्रोलियम पदार्थ अहिलेसम्म नेपाल भित्रिएकोमध्ये सबैभन्दा बढी हो,’ आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तीन महिना पूरै ड्राइ भएकोले अभाव हट्न नसकेको होला ।’
भारतले अघोषित नाकाबन्दीको समयमा १५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको थियो । माघको अन्तिम सातातिर अघोषित नाकाबन्दी खुलेपछि पेट्रोलियम सहज रुपमा भित्रिन थालेको थियो । फागुनको दोस्रो सातादेखि इन्डियन आयल कर्पोरेशन(आइओसी)ले माग अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ दिन थालेको थियो । त्यही महिनादेखि माग भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको छ तर बजार अभाव भने हटेको छैन ।
कहाँ हरायो पेट्रोलियम पदार्थ ?
आइओसीले माग भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ दिएपनि बजार अभाव भने अझै हटेको छैन । उपभोक्ताले एक सिलिन्डर ग्यासका लागि अहिले पनि लाइनमा बस्नुपरेको छ भने डिजेल अभाव पनि उस्तै छ ।
‘तीन महिनापछि सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आएपछि उपभोक्ताले सकेसम्म बढी भण्डारण गरिरहेका छन् । उपभोक्तामा अझैपनि मनोवैज्ञानिक त्रास कायमै देखिएको छ,’ निगमका प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘हामीले जति तेल आएको छ त्यति बजारमा पठाइरहेका छौ तर अझैपनि कम भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण हुन नसकेको निजी क्षेत्रको आयोजना, विकास निर्माण द्रुतगतिमा अघि बढेकोले समेत डिजेलको अभाव हट्न सकेको छैन । निगमका थानकोट डिपो प्रमुख नेत्र काफ्लेका अनुसार अहिले दैनिक १५ लाख लिटर डिजेलको माग छ । निगमले अहिले दैनिक सरदर ६ लाखको हाराहारीमा डिजेल दिइरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको माग ८ लाख लिटर भन्दा बढी छ तर निगमले ५ लाख लिटरको हाराहारीमा दिइरहेको छ । सामान्य समयमा डिजेलको माग ५ लाख लिटर र पेट्रोल तीन लाख लिटर मात्रै हो । ग्यासको अभाव अहिलेपनि उस्तै छ । मार्च महिनामा अहिलेसम्मकै बढी ग्यास भित्रिएपनि उपभोक्ताको सास्ती घटेको छैन ।
मुलुकभर ग्यासको महिनाभरीको माग २८ हजार टन हाराहारी हो । तर मार्च महिनामा ३० हजार १ सय ३५ टन आएपनि अभाव हट्न नसक्नुमा भारतको नाकाबन्दीको समयमा थपिएको १५ लाख सिलिन्डर रहेको ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बताए । उनका अनुसार पहुँच भएकाले अहिले एउटै परिवारले १० वटासम्म सिलिन्डर राखेको र पहुँच नभएकाले अहिलेपनि ग्यास पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारको सक्रियता खोई ?
सबैभन्दा बढी ग्यास भित्रिएपनि उपभोक्ताले अभाव झेलेकोप्रति सरकार भने बेखबरजस्तै बनेर बसेको छ । अनुगमन गर्ने निकायको प्रभावकारिता छैन । नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्रालय फुटाएपछि झन् अनुगमन हुन सकेको छैन ।
नाकाबन्दीको समयमा आयल निगममा स्थापना गरिएको कन्ट्रोल रुम बन्द भएको छ । आपूर्ति मन्त्रालय र आपूर्ति व्यवस्था विभागको अनुगमन शुन्य प्राय जस्तै छ । प्रहरीले केही स्थानमा ग्यास गोदाम र पसलमा छापा हानेपनि व्यवसायिक संगठनको हस्तक्षेपले निस्प्रभावी बनेको छ । स्रोतका अनुसार आपूर्ति व्यवस्था विभागमा चुस्त टीम छैन । सरकारी निकायवीचको समन्वय अभाव भएकोले समेत प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुन नसकेको भन्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउन छलफल थालेका छन् । उनले आइतबार आपूर्तिसचिव श्रीधर सापकोटा, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेसँग छलफल गरे ।
यो छलफलपछि सबै सरकारी निकायको समन्वयमा अनुगमन प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने र कालोबजारीमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।